Totoafo FC ihany!
2007-07-11 @ 17:23 in Spaoro
Lahatsoratra fahatelo avoakako androany. Malaza ho an’ny mpitia baolina fandaka amin’izao fotoana izao ny “kitra fokontany” karakarain’ny MBS Groupe ao amin’ny kianjan’ny Masindahy Misely Amparibe. Ekipa 125 tokoa ny efa nifanintsana andro maromaro izay. Efa miditra amin’ny fihodinana fahatelo moa ny lalao amin’izao fotoana izao. Katitakely eo amin’ny 11 ka hatramin’ny 15 taona no mifanintsana amin’izany. Mazava loatra fa samy manohana ny any amin’ny fokontaniny ny mpitia baolina fandaka.
Hita ihany koa fa misy ireo ekipa efa manana ny haizatrany tokoa na dia mbola boaikely aza no milalao ary misy no taitra tamin’ny dokambarotra nataon’ny fahitalavitra raha vao nisy ny fifanintsanana. Sarotra na dia izany aza no ahitana fahagagana fa ny mahay ihany no mety ho tafita. Mizara sokajy maromaro manko izy rehetra ka ny sokajy iray misy ekipa efatra. Dia ireo no mifampihaona ka ny voalohany ihany no tafita amin’ny 1/16n’ny famaranana.
Misy dia misy ireo tena miezaka sy mahay nefa manana lesoka be raha vao manao ady sahala fotsiny. Sarotra ny ahatafita raha vao resy indray monja. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manohana ny avy any amin’ny foktontany misy ahy ihany koa aho sady efa tafakatra amin’ny 1/16n’ny famaranana rahateo ry zareo. Totoafo FC 67ha ihany no ady eo e! Marihina fa ny tena mpifanandrina mampiaiky ny maro mpanaraka indrindra dia ny FC Andrady avy ao Itaosy nefa ho hita eo izany e!